के हो जनकपुरमा पैसा छरिएको हल्ला ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
के हो जनकपुरमा पैसा छरिएको हल्ला ?
पक्राउ गरिएका महिलाको स्वाब परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी
वैशाख ७, २०७७ अजित तिवारी, सन्तोष सिंह
जनकपुर — जनकपुरको महावीर चोकमा बिहीबार पैसामा थुक लगाएर फ्याँकेको हल्ला चलेपछि धनुषा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि शनिबार दुई महिलालाई नियन्त्रणमा लियो । पक्राउ परेका एक महिलाको आरडिटी रिर्पोट पोजिटिभ आएपछि सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायलाई लाञ्छना लगाउने गरी पोस्ट गरिए ।
शनिबार बिहान पनि जनकपुरको रंगभूमि मैदानको पश्चिमी बस्तीमा फेरि पैसा छरेको हल्ला फिँजियो । सुरक्षाकर्मीले त्यो बस्ती घेरेर खोजतलास पनि गरे । प्रदेश २ सरकारको मुख्यालय रहेको जचुकालिकै सामुन्ने आइतबार बिहान पनि पैसा छरिएको हल्ला भयो ।
महावीर चोकको घटनामा मुछिएका दुवै महिलाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकमा छन् । श्रीमान्‌ले पठाइदिएको १ लाख रुपैयाँ लिन नातामा नन्द–भाउजू पर्ने दुवै महिला बिहीबार बैंकतिर हिँडेको उनीहरुका आफन्तले बताएका छन् ।
प्रहरीलाई उनीहरुले दिएको बयानअनुसार बिहीबार रेमिट बन्द होला भन्ने सोचेर नन्दले १५ हजारको चेक पनि बोकेकी थिइन्, बैंकबाट पैसा निकाल्ने भनेर । नभन्दै रेमिट बन्द थियो । बिदेशबाट आएको रकम उनीहरुले झिक्न पाएनन् । चेक साट्न बैंक पुगे ।
बयानअनुसार उनीहरुले १० र २० का खुद्रा नोट पनि लिए । ढक्कीमा तरकारी बेच्ने नन्द–भाउजूलाई चानचुन पैसा आवश्यक परिरहन्छ । बैंकबाट पैसा साटेर महावीर चोक पुग्दा प्रहरीलाई देखेर आफूहरु आत्तिएर दौडिन थालेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यही क्रममा चानचुन पैसा खसेको उनीहरुले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।
‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जानीजानी पैसा छरेको देखिँदैन,’ अनुसन्धानमा खटिएका धनुषा प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘उनीहरुसँगै रहेको पैसा चाहिँ झरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ । तर, पैसा आत्तिएर भाग्दा झरेको हो कि नियतवश खसालिएको हो त्यसको अनुसन्धान जारी नै छ ।’
ती दुई महिलाले पैसा छरेको भनिएको ठाउँमा रहेको पसलको सटरमुनि समेत एउटा नोट कोचिएको फेला परेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानबाट सटरमुनि अरु नै कुनै मानिसले भ्रम फैलाउन पैसा कोचेको खुलेको बताएको छ । धनुषा प्रहरीले त्यो व्यक्तिको पनि खोजी गरिरहेको छ । ‘पैसा छरिएको आरोप लागेका दुवै महिलाको आर्थिक हैसियत कमजोर छ,’ धनुषा प्रहरीका एसपी रमेश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानले नियतवश नै पैसा छरेको पुष्टि हुँदैन । हामी घटनालाई गम्भीरतापूवर्क अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
पैसा छरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुवै महिलालाई प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विजय झाका अनुसार उनीहरुको आइतबार बिहान परिक्षणका लागि स्वाब लिइसकिएको र साँझ ६ बजेपछि मात्रै रिपोर्ट आउनेछ । ‘यी महिलाको बारेमा हल्लै बढी भयो,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘स्वाबको रिपोर्ट आएकै छैन । धेरैतिर पोजिटिभ आयो भने प्रचार गरियो ।’
धनुषा प्रहरीले महावीर चोकमा पैसा झारिएको बाहेकका घटनालाई ‘अफवाह’ भनेको छ । प्रहरीले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने किसिमले समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नेहरुलाई निगरानीमा राखेको जनाएको छ । पूरै समुदायलाई नै लाञ्छित गरेर समाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने र दुष्प्रचार गर्नेलाई सचेत गराउनुपर्ने मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्तले बताए । ‘समाजिक सद्भाव खलबल हुन नदिन सबैसित परामर्श गरिरहेको छु,’ दत्तले भने । मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसित भेटेरै समाजिक सद्भाव बिथोल्न भइरहेको प्रयास रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
सद्भाव बिथोल्न नखोजौं : मुख्यमन्त्री
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लडिरहेको बेला समाजिक सद्भाव खल्बलाउने कामले कसैको हित नहुने बताएका छन् । कान्तिपुरसँग आइतबार कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कसैले जानीजानी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउने काम गरेको पाइएमा कारबाही गरिने पनि बताए ।
‘संक्रमण बढाउने कसैले हर्कत गरेको छ भने प्रहरी–प्रशासनले कडाइका साथ अनुसन्धान र कार्बाही गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘चाहे त्यो जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायको होस् । तर, त्यही निहुँमा समाजिक सद्भाव खल्बलाउने प्रयास गर्नु राम्रो होइन । यसले कसैको हित गर्दैन ।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरीको अनुसन्धानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘समाजमा धेरै किसिमको मानिस हुन्छन् । उनीहरुको स्वार्थ धेरै ठाउँमा जोडिएको हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कोरोना संक्रमण यदि कसैले फैलाउने कोसिस गरेको छ भन्ने त्यो जुनसुकै जाति, धर्म वा सम्प्रदायको भए पनि कानुनभन्दा माथि हुन्न । यस्तोमा धार्मिक स्थलमा रहेकाहरु आफैं अगाडी आएर सहयोग गर्नुपर्छ ।’
सम्प्रदायिक कुराले कसैको कल्याण नहुने बताउँदै मुख्मन्त्री राउतले समाजिक सद्भाव बिर्गानुजस्तो खराव काम अरु नभएको बताए । ‘दुनियाँका ताकतवर देश कोरोनाको सामुन्न निरिह बनेका छन् । यो हाम्रो लागि पनि चुनौती नै हो । हामी कहाँ पुग्दैछौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको हविगत के हुने हो ? त्यता ध्यान नदिएर समाजिक सद्भाव खलबल पार्नु अपराध हो । त्यसैले समाजिक दूरी कायम गरेर सद्भाव पनि सबै मिलेर कायम राख्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ १४:४५
वैशाख ७, २०७७ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — सुरु गरौं पाकिस्तानी शायर सैयद सल्मान गिलानीको एक चर्चित कथनबाट । पाकिस्तानमा एउटा तब्लिगी जमाती चिल्ला (यात्रा) पूरा गरेर घर फर्केपछि पत्नीलाई पिट्दै गरेको अर्को एक व्यक्तिले देखेछ र भनेछ, ‘मुर्ख, भर्खर धार्मिक यात्रा गरेर आएका छौ, श्रीमतीलाई पिट्दैछौ ? यही सिक्यौ जमातमा ?’ झन् चिढिँदै उसले भनेछ, ‘यसले दाह्री राख्दिन ।’
अवाक् भएर त्यो व्यक्तिले भनेछ, ‘बेवकुफ ! महिलाको दाह्री कहाँ हुन्छ ?’
श्रीमानले भनेछ, ‘हो त्यो त थाहा छ महिलाको दाह्री हुँदैन । तर, इरादा त गरोस्, इरादा गर्न के ले छेकेको छ र ?’
यसबाट के थाहा हुन्छ भने तब्लिगी जमातमा हिँड्नेहरु इरादामा बढी विश्वास गर्छन् । अर्थात् उनीहरुको सोच हुन्छ– जो कोहीले जुनसुकै उद्देश्यका लागि इरादा गरोस् । मूलतः इरादाले उपलब्धि हात लाग्छ भन्ने शतप्रतिशत विश्वास हुन्छ जमातीमा । त्यसैले नयाँ व्यक्ति भेट्न बित्तिकै उनीहरुको प्रस्ताव हुन्छ– अल्लाहका लागि यात्राको इरादा गर ।
तब्लिगी जमातको इतिहास
तब्लिगी जमातको स्थापना सन् १९२६ मा भएको हो । सामान्यतया तब्लिकको अर्थ धर्मको प्रचार हो भने जमातको अर्थ समूह । यसको स्थापना भारतको हालको दिल्ली नजिकै भएको मानिन्छ । तब्लिगी जमातका संस्थापक हुन् मौलाना मोहम्मद इलियास । उनी भारतीय नागरिक हुन् । तब्लिगी जमातको पहिलो सम्मेलन सन् १९४१ मा भारतमै भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २५ हजार मुसलमान सहभागी थिए । सन् १९४० को दशकसम्म तब्लिगी जमातको समूह भारतमा मात्र सीमित थियो ।
पहिलो सम्मेलनपछि यसको विस्तार सुरु भएको देखिन्छ । भारतबाट पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुक हुँदै यो समूह एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकी मुलुकहरुमा पुगेको हो । अहिले विश्वका करिब १५० देशमा यो समूह छ । तब्लिगी जमात विश्वमै ठूलो संस्था (समूह) का रुपमा परिचित छ । नेपालमा पनि यो समूह करिब ६० को दशकदेखि सक्रिय छ । यो विशुद्ध आस्थावानहरुको समूह हो । इस्लाम भित्रकै एउटा समूह हो जो इस्लामका तौर–तरिकालाई स्थापित गर्न र समाजलाई गलत बाटोमा जान नदिन तल्लिन छ ।तब्लिगी जमातले हरेक वर्ष ठूला सम्मेलन आयोजना गर्छन्, जसलाई भनिन्छ इज्तिमा । दक्षिण एसियाली मुलुकसहित विश्वका विभिन्न विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा पनि यस्तो सम्मेलन वर्षमा धेरैपटक आयोजना हुन्छन् । यसपटक नेपालको सप्तरी, बोदेबर्साइन गाउँपालिकाकाको जाँजरमा पनि यस्तो सम्मेलन भएको थियो फागुन पहिलो साता । उक्त सम्मेलनमा पाकिस्तान, मलेसिया, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, भारतलगायतका मुलुकबाट तब्लिगी जमात सहभागी थिए । नेपालबाट पनि धेरै जिल्लाका मुसलमान सहभागी थिए । यस्तो सम्मेलनमा पनि इस्लामका आस्था र उसका तौर तरिकाबारे बहस हुन्छ ।
तब्लिगी जमातको प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्मालम्बीहरुबीच इस्लामको सही शिक्षा विस्तार र आस्थालाई पुनर्जीवन गर्नु हो । जो जन्मजात मुसलमान छन् वा जसले इस्लाम कबुल गरेको छ, उनीहरुलाई इस्लामका तौरतरिका अलवम्बन गराउनु उनीहरुको ध्येय हुन्छ । उनीहरुको चाहना हुन्छ, सबै मुसलमानले इस्लामिक विधिअनुसार जीवनयापन गरुन् । इस्लामका प्रवर्तक मोहम्मदकै बाटो अबलम्बन गरुन्, गलत बाटो नअपनाउन् । त्यसका लागि उनीहरु उपदेश दिन्छन् । गलत बाटोमा हिँडेको छ भने उसलाई प्रेमपूर्वक धार्मिक लइनमा ल्याउन भरमगदुर कोसिस गर्छन् ।
तब्लिगी जमातले घर छाडेर टाढा टाढासम्म यात्रा गर्छन् । त्यस्तो यात्रामा ३ वा ५ जनादेखि माथिको समूह हुन्छ । उनीहरु ३ दिन, ४० दिन, ४ महिना, ७ महिना र एक वर्षको यात्रा तय गर्छन् । तोकिएका दिन पूरा गर्नुलाई 'चिल्ला' पूरा गर्नु भनिन्छ । त्यस्तो यात्रामा सबै खर्च स्वयंले बेहोर्छन् । कतिपयले खाना पकाउने भाँडाकुडादेखि ग्यास चुलो, ओढ्ने ओछ्याउनेसमेत आ-आफ्ना देशबाटै बोक्छन् । यात्राअवधिभर उनीहरुको बसाई मस्जिदभित्रै हुन्छ ।
मस्जिदमै बस्नुको एउटा अर्थ के हो भने आफ्ना कारण गाउँ वा मस्जिद वरिपरिका व्यक्तिहरुलाई दुःख नहोस् । मस्जिदमा पानी, शौचालय र कतिपय स्थानमा भान्सासमेत उपलब्ध हुने भएकाले पनि उनीहरुलाई त्यहीं बस्न सहज हुन्छ । अर्को, उनीहरुले यात्रा सुरु गरेपछि समाजमा भइरहेका गतिविधि (राजनीति, मनोरन्जन, झैझगडालगायत) लाई चटक्कै भुलेर विशुद्ध इस्लामिक चर्यामा समय व्यतित गर्ने कसम खाएका हुन्छन् ।
तोकिएको दिन पूरा नहुन्जेलसम्म उनीहरुको बाहिरी दुनियाँसँग कुनै मतलब र सम्बन्ध हुँदैन । खानेकुरा किन्न, औषधोपचार र इस्लामिक उपदेश सुन्नका लागि घरघरमा बोलावट (दावत) का लागि मात्र मस्जिदबाट बाहिरिन्छन् ।
यो पंक्तिकारले पनि बाल्यकालमा जन्मस्थल गोरखामा तब्लिगी जमातका धेरै उपदेश सुन्ने अवसर पाएको थियो । मिठा परिकार बनाएर खुवाउने भएकाले बच्चाहरु उनीहरुप्रति आकर्षित हुन्थे । याद भएसम्म त्यस्ता तब्लिगीमा धेरैजसो पाकिस्तानी र भारतीय कम हुन्थे ।
जानकारहरुका अनुसार नेपालमा धेरैजसो तब्लिगी जमात पाकिस्तानबाट आउँछन् । पाकिस्तानमा तब्लिगी जमातप्रति आस्था राख्नेहरुको समूह ठूलो छ । त्यहाँबाट युवादेखि वृद्धसम्मै तब्लीगमा हिँड्ने प्रचलन छ । विभिन्न पेशाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलेसमेत विदा लिएर यात्रा तय गरेका हुन्छन् । पाकिस्तानबाहेक भारत, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्डलगायतका देशबाट पनि तब्लिगी जमात नेपाल आउँछन् । नेपालका मुसलमानहरु पनि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा तब्लिगमा जाने गरेको देखिन्छ ।
निर्धारित यात्रा अवधिभर कुनै निश्चित मस्जिदमा मात्र उनीहरुको बसोबास हुँदैन । सकेसम्म धेरैवटा मस्जिदमा गएर इस्लामिक उपदेश छर्ने ध्येय हुन्छ । समाजका अरु व्यक्तिहरुलाई पनि आफूजस्तै यात्रामा सामेल हुन अभिप्रेरित गराउने उनीहरुको अर्को उद्देश्य हुन्छ । नेपालका तराइदेखि मध्यपहाड हुँदै हिमाली जिल्लामासमेत तब्लिगी जमात पुग्ने गरेको देखिन्छ । कुन् ठाउँमा जाने र कहाँ नजाने भन्ने कुनै लिखित व्यवस्था छैन । मुसलमानहरुको एकाध घर भएका बस्तीमा पनि उनीहरु पुग्ने गरेका छन् । मुसलमानको स्थायी आवादी नभए पनि केही व्यापारीमात्र रहेको रसुवाको धुन्चेमा केही समयअघि पाकिस्तानी तब्लिगी जमात पुगेको देखिएको थियो ।
धेरैभन्दा धेरै मान्छेले उपदेश सुनुन् भन्नेमात्र होइन, धेरैले तब्लिग यात्राका लागि समय निकालोस् भन्ने पनि तब्लिगी जमातहरुको आकांक्षा हुन्छ । त्यसका लागि कुनै ठाउँको मस्जिद वा बस्तीमा एकपटक गरिएको दावत (आह्वान वा निमन्त्रणा) पर्याप्त नहुने भएकाले तब्लिगी जमातको यात्रा निरन्तर चलिरहन्छ । निश्चित विषयवस्तुमा मात्र एकोहोरो केन्द्रित भइराख्ने भएकाले तब्लिगीहरुले कतिपय देशमा ‘धार्मिक भेडा’को संज्ञा पनि पाएका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ १४:३८